Velona Jesosy! - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Velona Jesosy!
Raha afaka misafidy andinin-teny iray fotsiny ianao izay mamintina ny fiainanao kristiana manontolo, inona izany? Angamba ity andinin-teny voatonona be indrindra ity: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay? ( Jaona 3:16 ). Safidy tsara! Ho ahy ity andininy manaraka ity no zava-dehibe indrindra omen’ny Baiboly amin’ny fitambarany mba ho azony: “Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo” (Jaona 1.4,20).
Ny alina nialoha ny fahafatesany dia tsy tamin'ny mpianany fotsiny no nilaza fa "homena azy ireo ny Fanahy Masina", fa izy koa niresaka imbetsaka ny zavatra hitranga amin'ny alàlan'ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fiakarany. Zavatra tena tsy ampoizina loatra dia tokony hitranga, zavatra tena mahagaga, zavatra manaitra ny sainy fa toa tsy ho vita ilay izy. Inona no ampianarin'ireo fehezanteny telo ireo?
Tsaroanao ve fa ao amin'ny rainy i Jesosy?
I Jesoa dia miaina amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ao anatin’ny fifandraisana akaiky sy miavaka ary miavaka amin’ny Rainy. Jesosy velona ao an-kibon-drainy! "Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny hany Andriamanitra sady ao an-tratran'ny Ray no nanambara izany" (Jaona. 1,18). Nanoratra toy izao ny manam-pahaizana iray: “Ny hoe eo am-pofoan’ny olona iray dia midika hoe eo amin’ny famihin’ny olona iray, feno fikarakarana akaiky indrindra sy fikarakarana feno fitiavana avy amin’ny olona iray”. Teo indrindra Jesosy: “Ao an-kibon’ny Rainy any an-danitra”.
Tsapanao ve fa ao amin'i Jesosy ianao?
"Ianao ato amiko!" Teny kely manaitra telo. Aiza Jesosy Vao avy nianatra izahay fa manana fifandraisana tena izy sy mahafaly amin’ny Rainy any an-danitra izy. Ary ankehitriny Jesosy dia milaza fa ao aminy isika, tahaka ny sampany amin’ny voaloboka (Jaona 15,1-8e). Azonao ve ny dikan'izany? Mitovy amin’ny fifandraisan’i Jesosy amin’ny Rainy isika. Tsy mijery avy ety ivelany izahay mitady ny fomba hahatongavana amin'ity fifandraisana manokana ity. Anisan’izany isika. Inona no tena resahin'izany? Ahoana no nitrangan’izany rehetra izany? Andeha isika hijery kely.
Ny Paska isan-taona dia mampahatsiahy antsika ny fahafatesan’i Jesosy Kristy, ny fandevenana ary ny nitsanganany tamin’ny maty. Tsy ny tantaran'i Jesosy irery anefa izany fa ny tantaranao koa! Tantaran’ny tsirairay avy io satria Jesosy no nisolo sy nisolo antsika. Rehefa maty izy, dia niara-maty taminy avokoa isika rehetra. Rehefa nalevina izy, dia niara-nalevina taminy izahay rehetra. Rehefa nitsangana tamin’ny fiainana vaovao be voninahitra Izy, dia nitsangana ho amin’izany fiainana izany avokoa isika rehetra (Romana 6,3-14). Nahoana i Jesosy no maty? “Fa Kristy koa aza nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondrany anareo ho amin’Andriamanitra, ary novonoina araka ny nofo, fa novelomina araka ny fanahy.”1. Petrus 3,18).
Indrisy anefa fa maro ny olona mihevitra an’Andriamanitra ho toy ny antitra manirery izay mipetraka any an-danitra any ary mijery antsika avy lavitra. Ny mifanohitra amin’izany anefa no asehon’i Jesosy amintsika. Noho ny fitiavany lehibe dia nampiraisin’i Jesoa antsika tamin’ny tenany sy nitondra antsika ho eo anatrehan’ny Ray amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. “Ary rehefa handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa hianareo” (Jaona 1.4,3). Voamarikao ve fa tsy misy filazana na inona na inona tokony hataontsika na ho vitantsika mba hahatongavana eo anatrehany? Tsy ny fanarahana ny didy aman-dalàna akory no atao mba hahazoana antoka fa salama tsara isika. Izao tokoa isika: “Izy niara-natsangany tamintsika ka nametraka antsika any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy.” ( Efesiana 2,6). Io fifandraisana manokana sy miavaka ary akaiky izay ananan’i Jesosy amin’ny Ray amin’ny alalan’ny Fanahy Masina mandrakizay io dia lasa azon’ny rehetra idirana. Mifandray akaiky amin’Andriamanitra araka izay azony atao izy ireo izao ary nataon’i Jesosy ho tanteraka izany fifandraisana akaiky izany.
Tsapanao ve fa ao aminao i Jesosy?
Ny fiainanao dia sarobidy lavitra noho izay azonao eritreretina! Tsy ianao ihany no ao amin’i Jesosy fa ao anatinao koa Izy. Nivelatra ao anatinao izy ka mitoetra ao anatinao. Eo amin’ny fiainanao andavanandro, ao am-ponao, eritreritrao ary fifandraisanao Izy. I Jesoa no maka endrika ao anatinao (Galatiana 4:19). Rehefa mandalo fotoan-tsarotra ianao dia mandalo izany ao anatinao sy miaraka aminao Jesosy. Izy no hery ao anatinao rehefa tonga aminao ny fahatezerana. Ao amin'ny maha-tokana azy, ny fahalemena ary ny fahalemen'ny tsirairay amintsika ary faly fa ny tanjany, ny hafaliany, ny faharetany, ny famelan-keloka dia aseho amintsika ary maneho ny tenany amin'ny olon-kafa amin'ny alalantsika izany. Hoy i Paoly: “Fa Kristy no fiainako, ary ny fahafatesana no tombony ho ahy.” ( Filipiana 1,21). Ity fahamarinana ity dia mihatra aminao koa: Izy no fiainanao ka mendrika ny hanolotra ny tenanao ho azy. Matokia fa izy no ao anatinao.
Jesosy ao aminao ary ianao ao aminy! Ianao dia ao anatin'izany rivo-piainana izany ary hahita fahazavana, fiainana ary sakafo izay hanatanjaka anao ianao. Ity rivotra ity dia ao aminao koa, raha tsy izany dia tsy afaka ny ho nisy ianao ary ho faty. Ao amin'i Jesosy isika ary ato amintsika. Izy io no tontolo iainantsika, mandritra ny fiainantsika manontolo.
Nohazavain’i Jesosy tamin’ny fomba mazava kokoa io firaisan-kina io, tao amin’ny vavaky ny mpisoronabe. "Manamasina ny tenako ho azy Aho, mba hanamasinana azy amin'ny fahamarinana koa. Tsy ho azy ihany no angatahiko, fa ho an'izay mino Ahy koa noho ny teniny fa iray ihany izy rehetra. Tahaka anao ray "Raha ianao ato amiko, ary Izaho ao aminao, aoka izy ho ao amintsika koa, mba hinoan’izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy, ary nomeko azy ny voninahitra nomenao Ahy, mba ho iray izy. iray, Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho iray tanteraka izy, ka ho fantatry izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy sy tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy” (Jaona 1.7,19- iray).
Ianao ve, ry mpamaky malala, manaiky ny maha tokana anao amin'Andriamanitra sy ny maha tokana an'Andriamanitra ao aminao? Ity no tsiambaratelo lehibe indrindra sy fanomezana anananao. Avereno amin'ny fankasitrahanao an'Andriamanitra ny fitiavanao!